ပုဇွန် ငရုတ်သီးပွ ချိုစပ်ဟင်း | Wutyee Food House
« ကိုရီးယား ကင်ချီ
မြိတ်မုန့်ဟင်းခါး (သို့) မြိတ်မုန့်တီ »
November 8, 2011 by chowutyee ပုဇွန် ငရုတ်သီးပွ ချိုစပ်ဟင်း
ပဲငံပြာရည်အကြည် (light soysauce) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
ငရုတ်သီးမှုန့် (hot pepper flakes) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
သကြား (sugar) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း တ၀က်
ဟင်းချက်ဝိုင် (cooking wine) ♦ စားပွဲတင်ဇွန်း ၂ဇွန်း
နှမ်းဆီ (seasame oil) ♦ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ဇွန်း
ငရုတ်ကောင်းမှုန့် (black pepper) ♦ လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်
နှမ်း (seasame seed) ♦ အနည်းငယ်
၁။ အရင်ဆုံး ဆော့အတွက် ပါဝင်ပစ္စည်းများဖြစ်သော (ပဲငံပြာရည်၊ ငရုတ်သီးမှုန့်၊ သကြား၊ ဆန်ဝိုင်၊ နှမ်းဆီ၊ ငရုတ်ကောင်းမှုန့်) တို့ကို ခွက်တစ်ခုထဲ ထည့်၍ ရောမွှေထားပါ။
၂။ ပုဇွန်ကျားများကို ကျောခွဲကာ ချေးများ သန့်စင်ပေးပြီ ဆား(လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၃ပုံ၁ပုံ)၊ ကြက်သားမှုန့် (လက်ဖက်ရည်ဇွန်း တ၀က်) တို့ဖြင့် ရောနုယ်ပေးထားပါ။
၃။ ပြီလျှင် ပန်းကန်ပြားတစ်ခုထဲ ပုဇွန်၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်မြိတ်၊ ငရုတ်သီးပွ၊ မုန်လာဥနီတို့ကို ပြင်ထားပေးပါ။
၃။ ပြီမှ ဒယ်ထဲသို့ သံလွင်ဆီများ ထည့်ပြီ ပုဇွန်များကို အရင်ထည့် ကြော်ပေးပါ။
၄။ ထို့နောက် ပုဇွန်ရလျှင် ကြက်သွန်နီ၊ ငရုတ်သီးပွ၊ မုန်လာဥနီများကို ရောထည့်ကြော်ပေးပါ။
၅။ ပြီနောက် ဒယ်ထဲသို့ ဆောရည်များကို လောင်းထည့်လိုက်​ကာ ဆော့ရည် ပျစ်လာသည်အထိ တည်ထားပေးပြီ မီးပြန်ပိတ်လိုက်ပါ။
၆။ ပုဇွန် ငရုတ်ပွဟင်းပေါ်သို့ နှမ်းလေးများ ဖြူးပေးပြီ ထမင်းနှင့် မြိန်ရှပ်စွာ သုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ…
Posted in ကိုရီယားချက်ပြုတ်နည်း | 23 Comments	23 Responses
on November 8, 2011 at 12:19 pm | Reply မြတ်
ညီမလေးရေ အရင်တုန်းကဟင်းတွေကို မအားလို့ မချက်ဖြစ်ဘူး ။ ဒီဟင်းကိုတော့ ကိုယ်တိုင်လည်းကြိုက်တယ် ချက်ဖြစ်အောင်လို့အချိန်ပေးပြီးချက်ကြည့်လိုက်အုံးမယ်နော်
ညီမလေးရဲ့ဟင်းက ကြည့်ရုံနဲ့တင် ဗိုက်ကစားနေပြီး
on November 8, 2011 at 12:47 pm | Reply chowutyee
ဲမမြတ်ရေ ဒီပုဇွန်ဟင်းလေးက ချက်ရတာလည်း လွယ်တယ်၊ တကယ်လည်း စားလို့ ကောင်းတယ်။ လုပ်စားကြည့်ပါနော်.. ကျေးဇူးပါ..😀
on November 8, 2011 at 12:24 pm | Reply Hmone Gyi
You are making me hungry… heee look so yummy😀
haaa I will treat you, when u came back..🙂
on November 8, 2011 at 1:22 pm | Reply Evy
ဒီဟင်းကို လုပ်စားကြည့်ရမယ်။ မြန်ပြီး အရသာရှိမယ့်ပုံလေး
on November 8, 2011 at 1:28 pm | Reply chowutyee
ဟုတ်တယ် မရေ။ လုပ်ရတာလည်း မြန်ပြီ လွယ်လည်း လွယ်လွယ်လေးရယ်..😀
on November 8, 2011 at 2:10 pm | Reply Juliet Cho
ဒီဟင်းကို မနက်ဖြန်ချက်ဖြစ်အောင် ချက်အုံးမယ်။
on November 8, 2011 at 3:02 pm | Reply ချော(အစိမ်းရောင်လွင်ပြင်)
ဟင်းပွဲလေးက ချစ်ဖို့တောင် ကောင်းသေးတော့ ဝတ်ရည်ရယ်..
on November 18, 2011 at 4:26 pm | Reply chowutyee
hee Thanksalot Ma Chaw!🙂
on November 8, 2011 at 3:13 pm | Reply ခင်ယမုံ
on November 8, 2011 at 9:00 pm | Reply sandar
on November 18, 2011 at 4:24 pm | Reply chowutyee
Plz try Ma Sandar!😀
on November 8, 2011 at 9:45 pm | Reply Aye Aye
I tried this dish today. I use sherry instead of chinese cooking wine which not easy to get in my place and it taste still great! Thanks for this recipe.
Thanks you too!!😀
on November 9, 2011 at 12:35 am | Reply ခင်လေးနွယ်
ညီမလေးေ၇ ချက်စားဦးမယ်။ ကျေးဇူးနော်။
on November 11, 2011 at 7:40 am | Reply jasmine(တောင်ကြီး)
Jasmine အားရင် လုပ်စားကြည့်ပါနော်.. လုပ်ရတာ အ၇မ်းလွယ်တယ်..😛
on November 14, 2011 at 9:35 am | Reply nyunt nyunt win
on November 18, 2011 at 4:21 pm | Reply chowutyee
on November 22, 2011 at 1:24 am | Reply ma shin shin
သံလွင်ဆီနဲ့ ရိုးရိုးဆီနဲ့ ဘယ်လိုကွာလဲဆိုတာ ရှင်းပြပေးပါ။ သုံးနေပေမယ့် သေချာနားမလည်ဘူး။ ဘယ်လိုဟင်းမျိုးမှာ သုံးရပြီး ဘာထူးပြီးကောင်းနေလို့လဲ။
on November 27, 2011 at 2:03 pm | Reply chowutyee
သံလွင်ဆီနဲ့ ရိုးရိုးဆီက တော်တော်ကွာပါတယ်။ ဟင်းထဲ ထည့်တဲ့ အနေထားရော၊ အနံ့ရော ကွာပါတယ်။ သံလွင်ဆီက ကျန်းမာရေးလည်း ပိုညီညွတ်ပါတယ်။ သံလွင်ဆီကို Dressing မှာသုံးပါတယ်။ ကျေးဇူးပါ